Mune network yeLAN 192.168.8.100 ndiyo IP. Vanhu vazhinji havawani nzira yekupinda yeiyo intranet isina waya router WIFI. Unogona kuedza kudzvanya pane iyi link. https://192.168.8.100 pinda mukati meiyo admin interface. Kana iwe usingakwanise kubatanidza, iwe unogona kureva kune iyo router manejimendi yekunyorera yekugadzirisa. Kana iwe wakakanganwa mazita ako evashandisi uye mapassword, ingo tarisa iyo label kana bhuku reiyo router
IP kero inoshandisa 192.168.8.100, maitiro ekuishandisa?
Kutanga, kurudzira mashoma akagovaniswa hunyanzvi hwe IP kero. IP kero dzakakamurwa kuita mashanu marudzi eABCDE, pakati peiyo ABC inowanzo shandiswa. Pakati pemhando nhatu dzemakero, chimwe chikamu chakachengetedzwa kero, & mapakeji ane aya kero haakwanise kushandiswa Pakarepo yakapararira pamambure, IP kero yakachengetedzwa muC kero kero, inowanzo shandiswa muLAN network, default subnet mask ye C kero kero iri 5, ichitsanangura kuti C kero kero inogona kutora 3 IPs Zviripachena, pamwe neimwe network inomiririra, pane kana mumiriri mumwe chete anotumira. Ingori 255.255.255.0 inogona kugadzwa kumushandisi. Semuenzaniso, mushandisi IP wetiweki 256 inogona kunge iri kubva 254-192.168.1.0. Kudyidzana pakati pavo hakudi kufamba nenzira. Pakarepo mafaira anogona kufambiswa.
Kutaura, pfungwa yeiyi IP kero yakapararira zvakanyanya. Sezvo iri kero yakachengetedzwa, inoratidza kuti inogona kushandiswa paLAN futi. Kazhinji, inoshandiswa semushandisi IP, seIP ne mantissa ye .1 kazhinji inochengeterwa nzira yekupinda, saka 192.168.1.2-192.168.1.254 inogoverwa mushandisi. Kana muLAN mune DHCP server, unogona kuseta zvachose IP kero boka kune 192.168.1.2-192.168.1.254. Chinyorwa ichi chinogadzirisa otomatiki IP kero yemushandisi.
Chinhu chakasiyana ndeye ma routers asina waya anowanzo shandiswa mazuva ano. Kazhinji, iyo IP LAN chiteshi cherudzi urwu rwechishandiso kazhinji chine mantissa ye .1. Zvinokurudzirwa kuti vatengi vashandure LAN IP port kune imwe kero, kuitira kuti vamwe vatengi vatadze kufungidzira. Shanyira iwo asina waya maRWAN LAN chiteshi IP semuenzaniso, IP ndiyo yakanaka sarudzo. Zviripachena, iyo LAN chiteshi IP inogona kusetwa futi, hapana chikonzero chekusarudza iyo IP uchishandisa yekutanga network chikamu. Iyo IP yezvikamu zvakasiyana zvemumbure zvakavanzwa & zvakachengeteka; zvisinei, iwe unofanirwa kuziva mupfungwa kuti uchinje nzira yekupinda yemushandisi kune inoenderana, zvikasadaro haizive nzira yekubatanidza kunetiweki.
Mashoma mafemu madiki kana zvikoro zvinonyanya kukumbira seti kunze kweIP kero, & inotevera shandisa IP kugovera kushandisa iyo yese femu kana yechikoro system kuwana iyo net. Iyo IP kero inoshandiswa nemichina yezvikoro zvakadaro kana mabhizinesi ndiyo intranet IP.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti maPC ari mukati medandemutande anogona kutumira zvikumbiro zvekubatanidza kune mamwe maPC pamambure, zvakadaro maPC akasiyana paInternet haakwanise kutumira zvikumbiro zvekubatanidza kune maPC pamambure emukati nekuda kweFTP server pane yekunze network.